Laanta Socdaalka oo ka jawaabtay su’aalo la xiriira aqoonsiga iyo kharaabada | Somaliska
Waaxda saxaafada ee Laanta Socdaalka Sweden ayaa noo soo gudbisay su'aalahaan iyo jawaabahooda ay iyagu iskood u soo diyaariyeen si ay uga jawaabaan su'aalaha badan ee dadka Soomaaliyeed ay iska waydiiyaan arimaha Aqoonsiga, Socdaalka iyo Kharaabada. Su'aalahaan iyo jawaabahoodu waa kuwo dheer sidaa darteed waxaad ka akhrisan kartaa faylka aan halkaan soo galinay. Su'aalo iyo Jawaabo la xiriira cadeynta aqoonsiga iyo kharaabada [pdf] Raali Galin: Luuqada ay ku qoranyihiin su'aalahaan waa mid xoogaa adag, waa turjumaada Laanta Socdaalka ee anaga ma aanan turjumin.
Waaxda saxaafada ee Laanta Socdaalka Sweden ayaa noo soo gudbisay su’aalahaan iyo jawaabahooda ay iyagu iskood u soo diyaariyeen si ay uga jawaabaan su’aalaha badan ee dadka Soomaaliyeed ay iska waydiiyaan arimaha Aqoonsiga, Socdaalka iyo Kharaabada.
Su’aalahaan iyo jawaabahoodu waa kuwo dheer sidaa darteed waxaad ka akhrisan kartaa faylka aan halkaan soo galinay.
Su’aalo iyo Jawaabo la xiriira cadeynta aqoonsiga iyo kharaabada [pdf]
Raali Galin: Luuqada ay ku qoranyihiin su’aalahaan waa mid xoogaa adag, waa turjumaada Laanta Socdaalka ee anaga ma aanan turjumin.